Hetsika 16 Mai Lundi de Pentecôte karakarain'ny V3M
Accueil Ny fiainam-piangonana Ireo Vaomiera V3M Hetsika 16 Mai Lundi de Pentecôte karakarain'ny V3M
Écrit par Vaomiera logistique
Mamerina ny arahaba antsika mpiara-dia ato amin'ny Tompo,
Indro ampitaina amin-tsika etsy ambany ny fitsangatsanganana tanterahin'ny V3M. Izany no hatao dia ho entina hamatsiana ny "Projet ny Pasteur Matihanina"
" Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia mihaino antsika Izy; ary raha fantan-tsika fa mihaino antsika Izy, na inona na inona no angatahintsika, dia fanta-tsika fa azontsika izay angatahin-tsika Aminy"
I Jaona 5 ( 14-15).
Koa dia manentana antsika rehetra ho tonga maro amin'izany. Taomy ireo havana aman-tsakaiza hiaraka hitsangatsangana.
Ny asa vita sy izay mbola ho hatao anie dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.
Manonona ny fiadanan'ny Tompo ho antsika tsirairay avy.
Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Tompo;
Araky ny efa fantantsika dia hikarakara hetsika ny V3M izay hatao ny alatsinainy 16 MAI 2016. Ny toerana hitsangatsanganana dia :
Rue du Stade, 77167 Bagneaux-sur-Loing
Ireto avy ny ho varotan'ny V3M eny an-toerana:
Sakafo 10 € : vary sy laoka miampy hena hatono iray miampy tsindry sakafo
Rano fisotro 1 €: canette ,cristaline.
Divay 5 €
Miangavy ny hilazana sy hanaparitahana izao filazana izao amin'ny mpiangona sy ireo tapaka sy namana.
Hilazana ihany koa samy hitondra "couverts" ny tsirairay
Misaotra amin'ny fiaraha-miasantsika komity ary manantena ny maro amintsika hanohana sy hilaza ny ao amin'ny sampana tsirairay avy.